That Ol 'Blackmagic Pickathon | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ol '' Blackmagic Pickathon ကြောင်း
လက်ပံ, အော်ရီဂွန်အစောပိုင်းသြဂုတ်လအတွင်း Pickathon ဂီတပွဲတော်တည်ခင်းဧည်; ထိုအဖြစ်အပျက်သည်နောက်တဖန်ဒီစက်တင်ဘာလ 22 ကစားnd Freemont ကယ်လီဖိုးနီးယား၌တည်၏။ ဂီတချစ်သူများမှာ Blackmagic အလှအပတစ် bevy မှကုသခဲ့ကြသည် Pickathon ဂီတပွဲတော်, ဒီအာရုံခံအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးဖို့။ ဒါဟာခြောက်လ ATEM တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Switcher နှင့်အခြား Blackmagic devices များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူငါး Blackmagic စတူဒီယိုကင်မရာများကိုအသုံးပြုသွားမည်။
အများအပြားကအဆင့်ဆင့် set-တက်ခဲ့ကြသည်လူအစုအဝေးကိုရှောင်ကြဉ်ရန်။ မျိုးစုံအဆင့် (အဓိကအဆင့်ခဲ့ကြသည်သော 2) နှင့်အတူပြုမူသောအမှုအသီးအသီးမိမိတို့အလုပ်ရပ်ပျောက်ဆုံးအလားအလာပန်ကာအခွင့်အလမ်း minimize အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ကစားတဝိုက်လှည့်။
ရိုင်ယန် Stiles, ဒီအကျိုးတူ၏ဝါရင့်ထုတ်လုပ်သူ, 68 န်ထမ်းတစ်ဦးအမှုထမ်းညှိနှိုင်းအဖြစ် 223 စေတနာ့ဝန်ထမ်းသူကမြင်သောအခါအရည်အသွေးကိုပစ္စည်းကိရိယာများသိတယ်။ သူကို ရွေးချယ်. အဘယ်ကြောင့်ရဲ့တမန်တော်အမှန် Blackmagic ဒီဇိုင်း Pickathon များအတွက် key ကိုသုံးစက်ကိရိယာများအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
"ဒီ ATEM Switcher Pickathon မဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တာဝန်များကိုပြီးမြောက်ဖို့ခွင့်ပြု," Stiles ကဖော်ပြသည်။ "ကျနော်တို့ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်တစ်ခု universal လိုအပ် အဘယ်သူမျှမကိစ္စဒါရိုက်တာမှာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာစင်မြင့်တူညီရဲ့စနစ်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်အသုံးပြုခြင်း၏ရိုးရှင်းများနှင့်လွယ်ကူခြင်းတစ်ခုပတ်လည်ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ရသည်။ "
တစ်ခုချင်းစီပြသမူရင်းအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုရှိ၏ အဆိုပါပြပွဲ၏တဦးတည်းလုံးဝဒေသခံသစ်ပင်အကိုင်းအခက်ရေးစပ်တစ်ဦးစင်မြင့်ခဲ့! မူရင်းကဒီစံပြနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အလွန်ချက်နဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သင်တန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထစိန်ခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
"သူကသုံးပြီး၏အရေးပါမှုအလုံအလောက်အလေးပေးရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး," Stiles ကရှင်းပြသည်။ "Pickathon ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုမှာကျနော်တို့ကတစ်နှစ်အတွင်းအမှုထမ်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုးကနေလာ, ငါသူတို့သည်ငါတို့ဗေဒထက်နည်းပညာနှင့်အတူပျော့သွားတာကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင်ငါးမိနစ်ကာလအတွင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ATEM Switcher နှင့်စတူဒီယိုကင်မရာများကိုကျွန်တော်တို့ကို့လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ "
တစ်ဦး Blackmagic M / E ကိုထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုအသုံးချဖို့နှင့်သုံး ATEM ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Switcher သင်္ဘောသားတစ်ဦးချောမွေ့လုပ်ငန်းအသွားအလာ facilitated ကြောင်းအသုံးပြုမှုများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အစာကျွေးခြင်း၏ 223 နာရီကိုထုတ်လုပ်သည့် 44 စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ, အဆုံး၌အခွက်တဆယ်တိုးမြှင်နှင့်တခုအဖြစ်, သင်္ဘောသားကုန်အံ့။ ဒီအစာကျွေးခြင်းဂီတပွဲတော်များနှင့်ဒေသခံရေဒီယိုဘူတာရုံ KEXP ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါင်းစပ်မှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်တာနက်ပရိသတ်ကိုမှကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအနုပညာရှင်များ, ပညာရှင်များ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကောင်းစွာပြည်တွင်းထုတ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နားဆင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ်သို့ထောင်ပေါင်းများစွာအတူဂီတမျှဝေသုံးစွဲခဲ့ကြသည်များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု။
အဓိကအနီးရှိဗျူဟာမြောက်နေရာချ, တစ်ဦး 57 ခြေလျင်ထုတ်လွှင့်ထရပ်ကားတစ်ခု ATEM 1 M / E ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K နှင့်တစ်ဦး ATEM 1 M / E ကိုအသံလွှင့် Panel ကိုပါရှိသော။ ဤသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုကြားဂီတ၏အဆင်းလှသောမုန်တိုင်းထုတ်လုပ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦး maelstrom ၏မျက်စိဖြစ်ခဲ့သည်။3ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အဆိုပါခလုတ်ဤအရပ်ပုဂရုတစိုက်တည်းဖြတ်အကြောင်းအရာများကိုအားလုံးစင်မြင့်ရဲ့ feeds တွေကိုသည့်။
အဆိုပါ Blackmagic စတူဒီယိုကင်မရာ HD ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ sunshade အတူ 10 "view finder ပါ (ဤမွငျ့မား resolution ကို screen ကိုဂုဏ်ယူ အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုအော်ပရေတာတောင်မှတိုက်ရိုက် streaming နေစဉ်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုများအတွက်သိမ်မွေ့ချိန်ညှိစေရန်ခွင့်ပြု), MFT မှန်ဘီလူးတောင်ပေါ်မှာ (အပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, မှန်ဘီလူး options များနှင့်မျိုးစုံကိုအထိုင်မှတ်) အတွက်, 1080p60 အထိအထောက်အပံ့ (သူတို့အား pixels ကိုကိုချစ်!),4+ နာရီ (အစားလည်းပါဝါကွိုးနှငျ့ messing ထုတ်လုပ်မှုဖို့အော်ပရေတာချိတ်ဆက်ကာရယူခြင်းရုံတစ်ခုတည်း bi-directional fiber optic cable ကိုခွင့်ပြု,) ဘက်ထရီ Talkback (အော်ပရေတာများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအကြားပိုမိုကောင်းမွန် co-ရာ၌ခန့်ခွင့်ပြု), တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံ control panel ကိုတာလီချိုး illuminated, ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ် ပြင်ပမိုက်ခရိုဖုန်း။ သငျသညျပုံအရ, ဒါကြောင့်တစ်ဦး Ultra-spiffy ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။
"ဒီတစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအတူတကွချပြီးတဲ့အခါ, ငါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုစုံလင်သော, ငါတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်မိုဘိုင်း၏အ Blackmagic စတူဒီယိုကင်မရာများကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်သိတယ်" Stiles ကဆိုသည်။ တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ "menus တွေ၏အတွင်းပိုင်း menus တွေအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကင်မရာရွေးချယ်စရာရန်စတူဒီယိုကင်မရာရဲ့လွယ်ကူစွာအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ထိုသူနှစ်ယောက်အရောင် setting များကိုအကြီးအထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ post ကိုတည်းဖြတ်အရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြားချပ်ချပ်သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးတော့တိုက်ရိုက် streaming သည့်အခါချမ်းသာတန်ချိန်များအတွက်ဗီဒီယိုကျော် switched ။ "bi-directional fiber optic cable ရဲ့ 3,800 ပေထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားများနှင့်အဆင့်ဆင့်အကြားအသုံးပြုခဲ့သည်, ဒီတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် အလွန်ငယ်သော ဆဲထိပ်တန်းရုပ်ပုံနှင့်အချက်အလက်ပေးနေချိန်မှာဒီ Blackmagic ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအသုံးဝင်သော cable ကိုအရှည်၏အစိတ်အပိုင်း။ Stiles ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြထား "ပထမတစ်နေ့ရဲ့အဆုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကင်မရာအော်ပရေတာ, အစတူဒီယိုကင်မရာများကိုချီးမွမ်းခြင်းပေမယ့်ဘာမျှခဲ့" ။ "ငါသည်စတူဒီယိုတစ်ခုကိုပြောချင် ကင်မရာ Multi-ကင်မရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်ဖြစ်၏။ "
ဤအချက်မှာဝါရင့်ထုတ်လုပ်သူဆက်ဆက်အအေးဒီပွဲတော်ချထားပါတယ်။ သူကပြသပါရဲ့တဆယ်ခြောက်နှစ်ကသက်တမ်းအတွင်းလက်ရှိညျဘဏ်ဍာအများအပြားများအတွက် Pickathon ဂီတပွဲတော်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "ငါနောက်ဆုံးခြောက်နှစ်များအတွက်ပွဲတော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျနော်တို့ပွဲတော် goers နှင့်အွန်လိုင်းကြည့်ရှုသူများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ။ ကျနော်တို့အပေါ်အားကိုးအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာင် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့် streaming များ Workflows တာ။ "အကြီးစားနှင့်အသေးစားအသေးစိတ်ကိုရှိသည်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့။ တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုတည်နေရာ, သင်တန်း၏, အစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်စိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဝါရင့်ပညာရှင်များနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများသေသပ်စွာအများဆုံးပြဿနာများ & စိန်ခေါ်မှုများအောက်မှာလယ်ထွန်ခြင်းကိုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Pendarvis လယ်ယာ (သြဂုတ်လတည်နေရာ) ကိုလည်းခေါ်ဂီတသမားနှင့်အတူအချို့သောပုဂ္ဂလိကအစည်းအဝေးများခဲ့ "ဟုအဆိုပါလယ်ယာတွင်။ " ဒီအစည်းအဝေးများထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြခြင်းနှင့် 2015 တစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဤအအစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုကင်မရာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K ။ ဒါကထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကင်မရာကို Global Shutter (သူတို့အားဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ကိုလှိမ့ရှပ်တာအပိုငျးအရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးနေစဉ်ရုပ်ပုံစုံလင်သောအားပွတ်ဆွဲဘို့ခွင့်ပြု), တစ်ဦးနှင့်အတူစူပါ 35 အာရုံခံရှိပါတယ် ကို Canon EF Lens ကိုတောင်ပေါ်က၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏ (ခွင့်ပြုအသုံးချ ကို Canon'' s ကို EF မှန်ဘီလူး - သို့မဟုတ်တစ် Zeiss ze မှန်ဘီလူးတစ်ခုသို့မဟုတ်တတိယပါတီ EF မှန်ဘီလူး mount) ။ ဒါ့အပြင် က Ultra HD 4K နှင့် 1080HD ProRes မှတ်တမ်းတင် (က Ultra HD ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ (HQ, 4, LT, Proxy) ၏ ProRes 3840 မိသားစုကို အသုံးပြု. 2160K (1080 × 422) နှင့် 422p ။ တစ်ဦးကဧရာ 3840 x ကို 2160 pixel အစီအစဉ် 4X 1080p ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါ 6G-SDI output ကိုဖော်ပြခဲ့သလား ဒါဟာ Pickathon ကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်။ CinemaDNG RAW ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် (Post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုခမ်းနားပျော့ဘက်စုံသုံးသေးသည်အခြား feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 4000 အတွက် RAW မှတ်တမ်းများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ pixel တစ်ခုချင်းစီဟာအာရုံခံအောင်, 2160 resolution ကို×) ။ Built-in SSD ကို Recorder (အဆိုပါ 2.5 "SSD ကိုဖြုတ်ဖြစ်ပါတယ် & သင်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာကနေတိုက်ရိုက်ပြန်ဖွင်နိုင်ပါတယ်တစ်ဦးက ) အလိုရှိသော။ Dynamic Range ၏ 12 ရပ်နားမှုများ (အံ့သြဖွယ်အသေးစိတ်ခွင့်ပြုခြင်း, အတော်လေးမကြာခဏဒီစွမ်းရည် image ကိုဖွင့် messing မပါဘဲလက်ျာဘက်တစ်ဦးအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု), နှင့်စံဆက်သွယ်မှု (ငါကပိုလို့ပြောလိုအပ်ပါတယ်?) Touchscreen LCD display (ဤ5"LCD display ကိုဖြစ်ပါတယ် 800 480 resolution ကို, ဒီ touchscreen က menus တွေနှင့်ပြောင်းလဲမှု settings ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချလို့ရပါတယ် x ။ နှစ်ချက်မျက်နှာပြင်နှိပ်တိကျအာရုံနဲ့အမြန် zoom ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နေစဉ်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါ) အချို့ mucho အထောက်အကူဖြစ်စေ meta-data ကိုမှအမြန် access ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Power Options ကို (အဆိုပါပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကိုတကယ်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူအချက်တက် cranks ။ 12 ၏ Input ကိုဗို့အားအကွာအဝေး Volts 30 ရန်သင့်အားပြင်ပပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်ထရီထုပ်အမျိုးမျိုးပူးတွဲပေးနိုင်ပါတယ်) ။ ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေး (လှံ protocol ကို) ။ DaVinci အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် software ကိုဖြေရှင်းနှင့်ပိုပြီး။
ဂီတပွဲတော်များသှားစဉျ, Pickathon ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, ပရိသတ်ကိုနှင့်အဆိုတော်မဟုတ်စိတ်တော်ကိုရှာတတ်၏ကြောင်းကိုရှားပါးငှက်ဖြစ်၏ ပန်းတိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ကမကထလှပသောကောက် တည်နေရာနှင့်သူတို့ကြောင့်လမ်းနေဖို့သေချာအောင်ဖို့တငျ့တယျလြောကျပတျခွငျးရှိသည်။ အဆိုပါ site ကိုခိုင်မြဲစွာဂေဟဗေဒတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိနှင့်အတူ, အလွန်စင်ကြယ်သောထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ စတိုင်ရိုဖောင်း? မေ့လိုက်ပါ! ပလပ်စတစ်ခွက်ထိုနည်းတူပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြနှင့်ပလပ်စတစ်ရေဗူးအလားတူကံကြမ္မာခံစားခဲ့ရသည်။ Kleen Kanteen, ထိုအဖြစ်အပျက်၏သကျတမျးကွာစပွန်ဆာ, အဖျော်ယမကာပေးပို့မှုအတွက်အဖြေရှိပါတယ်။ သံမဏိခွက် - ပို. လွယ်ကူသည်သင်၏ခွက်ကိုသန့်ရှင်းရေးများနှင့်သိုလှောင်လုပ်ရရှိနိုင်နည်းနည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ။ ပျော်စေဘူတာအမျိုးမျိုးသောနေရာများမှာဆိုက်အကြောင်းကိုပင်ပြန့်နှံ့ခဲ့သညျ။ အိုကေဒါကြောင့်အချိုရည်အဘို့အဖြေမယ့် - သျောအဘယျစားစရာကိုအမှိုက်ကော?
ဟင်းပွဲများနှင့်ထုပ်, ပလပ်စတစ်တန်ဆာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်-မဟုတ်လော စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်, ဒီအဖြေဖြစ်ပါသည်: Uhh ... NO! (အိုကေ, ကြောင်း2စကားလုံးများကိုင်, သင်မူကားငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုငါတို့သိကြ၏) ။ ဘယ်လိုအစားအစာပြီးတော့ကိုင်တွယ်ခဲ့သလဲ တစ်တန်ဆာ & ပန်းကန်မုန့်ညက်လက္ခဏာသက်သေနှင့်အတူသင်တန်း! ပွဲတော်ရဲ့ start မှာသင်တိုကင်ကိုဝယ်ကြလော့။ တစ်ခုချင်းစီရောင်းချသူသူတို့ရောင်းအစားအစာမှသင့်လျော်သောတန်ဆာအစာစားခြင်းအဘို့သင့်လက္ခဏာသက်သေကုန်သွယ်မှုပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ repast ပြီးစီးသည့်အခါသင်ဖလားနှင့်ဇွန်း (သို့မဟုတ်ပြားနှင့်ချိတ်) ဆောင်ခဲ့ပြန်နှင့်ရောင်းချသူသင်သည်အခြားလက္ခဏာသက်သေကိုငါပေးမည်။ လူအားလုံးတို့သည်ထမင်းစားခန်းသုံးကိရိယာကြံ့ခိုင်ဝါး၏ လုပ်. , ဖောက်သည်များကသူတို့ကိုပြန်လာသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီရောင်းချသူသူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးနေကြသည်။ ဝိုး! ခဲမဆိုအမှိုက်!
ဒါဟာ (အချို့ပွဲတော်များမတူပဲ) လည်း, မိသားစု-ဖော်ရွေခဲ့ ... 12 အောက်တွင်ကလေးများအခမဲ့ခုနှစ်တယ်။ တက်ရောက်လာ၏တစ်ဦးကအများကြီးစားခန်းချကြ၏-ထဲကသြဂုတ်လဖျော်ဖြေပွဲ site ကိုမှာ။ မော်တော်ကားအသွားအလာဘတ်စ်ကားများနှင့်စက်ဘီးကို အသုံးပြု. နိမ့်ဆုံးမှထားရှိမည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဂီတလုပ်ရပ်များ, ထုတ်လုပ်သူရိုင်ယန် Stiles နှင့် 68 နှင့် 223 စေတနာ့ဝန်ထမ်း, အရည်အသွေးတူရိယာ, Blackmagic ထုတ်ကုန်တစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နှင့် KEXP ရေဒီယိုသူ၏သင်္ဘောသားအားလုံး Pickathon တစ်ထို့နောက်အောင်မြင်မှုစေရန်ပေါင်းစပ်။ ဒီ link ကိုသင်ပြွန် Pickathon ဗီဒီယိုများဆက်တိုက်ရန်သင့်အားကြာမြင့်: www.youtube.com/watch?v=KiJt4XSgMoA&list=PLOibpJxM55Fif1xQITEwa_XLCjlWAh564
Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ထုတ်ကုန်ဖန်တီး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာ, အရောင် correctors, ဗီဒီယို converters အဖြစ်, ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်မှု, router များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု Switcher, disk ကိုအသံဖမျး, waveform မော်နီတာနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်ရုပ်ရှင်စကင်နာ။ Blackmagic ဒီဇိုင်း'' s ကို DaVinci အရောင်ဆုံးမခြင်းထုတ်ကုန်အနိုင်ရကုမ္ပဏီ၏သူဟာ Emmy ™ဆု 1984 ကတည်းကရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးစိုးခဲ့ကြစဉ် DeckLink ဖမ်းယူကတ်များ, Post-ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်တတ်နိုင်အတွက်တော်လှန်ရေးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း 6G-SDI နှင့် 12G-SDI ထုတ်ကုန်များနှင့် stereoscopic 3D အပါအဝင်မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်တီထွင်မှုဆက်လက်နှင့် က Ultra HD Workflows ။ post ကိုထုတ်လုပ်မှုအယ်ဒီတာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများဦးဆောင်လောကကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Blackmagic ဒီဇိုင်း ယူအက်စ်အေ, ယူကေ, ဂျပန်, စင်ကာပူနှင့်သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ရုံးတွေရှိတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး www.blackmagicdesign.com.
4K ATEM ထုတ်လုပ်မှု Switcher Black ကမှော်စတူဒီယိုကင်မရာများကို Blackmagic ဒီဇိုင်း အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ မျက်ကပ်မှန် Picathon post ကိုထုတ်လုပ်မှု ရိုင်ယန် Stiles 2014-09-28
ယခင်: ILOOK: သာလျှင်မြို့မှာရှိတဲ့အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား (OTT) ပေးသူကျော်အဆိုပါ!
နောက်တစ်ခု: pixel ပါဝါဇယားစကော့တလန်ဆုံးဖြတ်ချက်